British-American ifilimu nezisebenzi eholwa umqondisi Terence Davies idale isithombe indaba emangalisayo ethinta inhliziyo esekelwe play by Terence Rettig "Deep Blue Sea". Premiere show wawuba ngasekuqaleni 2011 emcimbini wokuvala edumile Film Festival e-London. Lesi sihloko echazwe okuqukethwe ifilimu melodramatic "Deep Blue Sea". Abalingisi kanye izindima yethuliwe.
Isihloko idrama amanga ezinamaphiko ngesisho sesiNgisi esithi elifanekisela isimo lapho umuntu ophoqelelwe opt okubi elincane. Le filimu Heroine nemihlatshelo ngenxa yothando nokuqonda abathandekayo, abanye basihloniphe.
Abadlali of the ifilimu "Deep Blue Sea"
Tindzima labalulekile eluLwimi ifilimu nge lwendaba okukhulu kuyenziwa ezweni ifilimu izinkanyezi Tom Hiddleston futhi Reychel Vays, okuyinto waqokelwa umklomelo "Golden Globe" kusigaba "Umlingisikazi Kuhle".
Tom Hiddleston esenze intuthuko e ifilimu umsebenzi wakhe ngo-2011. Okusho ukuthi, ngesikhathi esifanayo, lapho kwavela idrama ethi "Deep Blue Sea". Nokho, umlingisi, eyaduma hhayi ngenxa indima eyinhloko kulesi ifilimu. Impumelelo yakhe ukweleta imidwebo "Thor," "The Avengers."
Reychel Vays wenza ifilimu yakhe DEBUT ngo-1995, ngemva kwalokho ngempela ngenkuthalo wathwebula. Nanguya izindima mayelana amathathu ephethwe ukudlala ngaphambi wamenywa ukuba indima protagonist in the movie "Deep Blue Sea".
Abalingisi kwakuhlanganisa Simon Russell Beale. Nicolas Amer, Zholion Tsoy, uKarl Dzhonson noSara Kents kudlalwa izinhlamvu ezincane. Kufanele usitshele kabanzi mayelana ifilimu, indaba akuyona akhishwe eyodwa izinyembezi izibukeli British ne-US.
Yini ifilimu "Deep Blue Sea"?
Abalingisi ezishiwo ngenhla sidalwe ngomhlaka- elidumile uthando unxantathu esibukweni. Isithombe kuyoba mnandi ukubukela abantu okungenani kanye empilweni yakho uwela ziyahlanya othandweni futhi benza izinto ngendlela yokusangana. Ngobatjho e ifilimu, uzonikhumbuza ezinye izibukeli ngokuphela kokuhlupheka okubangelwa ukuba abathandekayo. Futhi yena uyovusela ezisenkumbulweni ngendaba ebuhlungu indaba UTolstoy mayelana nentokazi emphakathini okusezingeni eliphezulu, ngubani ngenxa yothando kanye nogqozi lwakhipha isikhundla emphakathini, ukulala elizolisayo futsi wabaniketa kuthula kwengcondvo. Futhi, njengoba sazi, waphelela kabi.
Le filimu lihlelwe zamashumi amahlanu ekhulwini elidlule leminyaka. Akunjalo kudala wanqamuka neMpi Yezwe II. Amadoda ebuyela ekhaya, futhi labo abasala empini, waya eholidini ukuze uvakashele izihlobo nabangani.
Ngesikhathi umlingiswa oyinhloko we idrama - Hester - ukuphila konke okungahlala dream owesifazane: indlu, ukujula nokuzola, umyeni Cabangisisa ngothando, umahluleli owaziwa Uillyam Kollier. Yiqiniso, emdala nomkakhe, kodwa lathi linomuzwa wokuthi kuye like kukhona udonga lwamatshe ngapha.
Ngesinye isikhathi, owesifazane ihlangabezana bangaphambili umshayeli lempi uFreddy, eyadlalwa inkanyezi ifilimu "Thor." Ungishiya crazy in love with elihle eliselincane futhi ilungele kuye ngaso sonke. Hester ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle othandekayo umzuzu, ngenxa okuyinto iziphatha awayiphazamisi kakhulu. Khona-ke kufanele sicele intethelelo futhi ifunda othethelelayo kakhulu, ukuze sikhuthazele ukuthukwa kusukela Freddie sikhale ngomunyu. Ukuze umshayeli lona wesifazane kwenye nje mkhuba. Akayena ukulungele abathanda ngayo afanayo.
Hester onamahloni okubonwa izinkanuko zakhe ezimbi. Yena ezama ukuzibulala, kodwa bamkhulumela. Ngemva kwalokhu ifilimu, Heroine enquma ukuphula ngokuphelele off ubudlelwane nomyeni wakhe nabangu-kwalasha lothando kanye nogqozi, kunjengokungathi ulwandle deep blue. Abadlali, ngokuvumelana baxgeki, kudlalwa excellently. Kwazise-ke Kwaphawulwa futhi oqondisa.
Njengoba for isiphetho sale drama, ikhulume ngokuhlakanipha British akazange avumele Hester ukwenza iphutha Karenina. Once in the "olwandle olujulile blue", waya Liverpool Street Charing Cross ukuhlangabezana isitimela.
U-Elsa Scarlett anime "Fairy Tail": incazelo uhlamvu kanye biography
Iphrinta Canon Pixma G1400: ukubuyekezwa kanye izici